Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. राजनीति – Janata Live
कञ्चनपुर– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज (बिहिबार) सुदूरपश्चिम आउँदै छन् । यहि बैसाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न ओली सुदूरपश्चिम प्रदेश आउन लागेका हुन् । बिहीबार कञ्चनपुर र कैलालीका तीन ठाउँमा चुनावी आमसभालाई ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका, कैलालीको धनगढी र बर्दगोरियामा आयोजना हुने आमासभाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको नेकपा एमाले कञ्चनपुरका सचिव पल्लबराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौंबाट अहिले हवाईजहाजबाट धनगढी अवतरण गर्ने ओली हेलिकप्टरमार्फत सुरुमा बर्दगोरियाको कार्यक्रममा सहभागी हुने छन् । त्यसपछि दिउँसो २ बजे कञ्चनपुरको बेलौरीस्थित खुलामञ्च आयोजना हुने...
काठमाडौं– सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा बागी उमेदवारहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने उर्दी जारी गरेको छ । पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्रोही उम्मेदवार, निजको प्रस्तावक र समर्थक पार्टीबाट स्वतः निष्काशित हुने जानकारी दिएका छन् । यस्तै, आज बेलुका ५ बजेभित्र त्यसरी दर्ता गराइएको उम्मेदवारी फिर्ता लिन पनि निर्देशन दिइएको छ । ‘२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारका विरुद्ध पार्टीका कुनै सदस्यले विद्रोही उम्मेदवारी दर्ता गरे/गराएको भए निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएको मिति र समय (आज वैशाख १६ गते शुक्रबार बिहान १० देखि ५...
काठमाडौं– नेपाली काँग्रेसले चुनावी अभियानका लागि नेताहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ । मंगलबार बसेको काँग्रेस बैठकले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावमा पार्टीलाई जिताउन नेताहरुको जिम्मेवारी तोकेको हो । काँग्रेसले ७७ जिल्ला हेर्ने गरी नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ । निर्वाचनमा काँग्रेसलाई जिताउन भन्दै काँग्रेसले एक महिना “गाउँ गाउँमा काँग्रेस” अभियान चलाउँदै छ । अभियान यही फागुन २९ देखि चैत २९ गतेसम्म चल्ने काँग्रेसले जनाएको छ ।
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठसहित पूर्व एकता केन्द्र समूहका नेताहरुले पार्टीबाट विद्रोह गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । एमसीसीको विपक्षमा उभिएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, अञ्जना विशंखे, जीवन गौतमलगायतका पूर्व एकता केन्द्र पक्षका नेताहरु पार्टीबाट बाहिरिने खतरा बढेको छ । उनीहरुलाई पार्टीभित्रै अड्याउनु पर्ने चुनौती आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पूर्व एकता केन्द्र समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फकाउने प्रयास थालेका छन् । प्रचण्ड मंगलबार श्रेष्ठको निवास हात्तीवनमै पुगेर मतभेदलाई पार्टीमै बसेर छलफल गर्न तर...
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यले भोलि (शनिबार) प्रमाणपत्र पाउने भएका छन् । निर्वाचन समितिले नव निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई पुस १० गते प्रमाणपत्र वितरणको तयारी अघि वढाएको हो । महाधिवेशनबाट १३ जना पदाधिकारी र १३४ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुलाई १० गते विहान ११ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा प्रमाणपत्र वितरण गरिने निर्वाचन समितिका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमितिको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । मत परिणामअनुसार नव निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति शेरबहादुर देउवा समूहको दुईतिहाइ बहुमत आएको छ । निर्वाचित हुने एक सय ३४ सदस्यीय...
कांग्रेस खुला केन्द्रीय सदस्यको २,३९३ भोट गन्दा कसको कति ? (सूचीसहित)
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यमा गए रातिसम्म २,३९३ मत गणना भएको छ । बाँकी भोट आज (आइतबार) बिहानदेखि गणना गरिने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार आधा मत गणना हुँदा डा. शशांक कोइराला अग्रस्थानमा छन् । उनले १,९७१ मत प्राप्त गरेका छन् । डा. कोइरालालाई एनपी साउदले पछ्याइरहेका छन् । उनको १,५३८ मत छ । त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेका बालकृष्ण खाँणको १,५०७, चौथो नम्बरमा रहेका रमेश लेखकको १,४५१ र पाँचौ नम्बरमा रहेका उदय शम्शेर राणाको १,४५१ मत छ । कांग्रेसमा खुला केन्द्रीय सदस्यतर्फ ३५ जना निर्वाचित हुनेछन् । जसका लागि ९९ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । अहिलेसम्म चर्चित...
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले शेरबहादुर देउवाको विजयमा पार्टीले उत्सव नमनाउने बताएका छन् । पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन भएकाले जितको खुशीयालीमा अबिरजात्रा र नाराबाजी नगर्ने उनले बताएका छन् । विपक्षी पार्टीलाई पराजित गरे जस्तो विजयउत्सव मनाउन आवश्यक नरहेको उनले बताए । पार्टीका अन्य पदाधिकारी र सदस्यको मत परिणाम आएपछि जिम्मेवारी सम्हाल्दै सुभकामना आदानप्रदान गरिने नेता खाँणको भनाइ छ । सभापति पदका लागि भएको मतदानको मतगणनाको अन्तिम नतिजापछि सञ्चारकर्मीसँग उनले पराजित भएको समूहलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिने जानकारी दिए । सबै पक्षलाई समेटेर पार्टीलाई थप सशक्त बनाउँदै अगाडि बढाउने रणनीति रहेको उनको भनाइ छ । निर्वाचन समितिले अन्तिम मतपरिणाम सुनाउँदा देउवा मतगणास्थलमा...
काठमाडौं– नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा जिपछिरिङ लामाले उम्मेद्वारी दिने हुनुभएको छ । पार्टीको मंसीर २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म हुन लागेको १४ औँ महाधिवेशनमा लामाले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेद्वारी दिन लाग्नुभएको हो । पार्टीलाई पारदर्शी र विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउँदै पार्टीभित्र देखिएको गुठ उपगुठको अन्त्यका लागि आफूले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेद्वारी दिन लागेको लामाले बताउनुभयो । “काँग्रेसभित्र ३६४ दिन काँग्रेस हुने र एक दिन काँग्रेस नहुने रोग रहेको छ, यसलाई अन्त्य गर्नका लागि मैले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेद्वारी दिन लागेको हुँ,”– लामाले भन्नुभयो । ६५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ताको व्यवस्था गर्ने, पार्टीको विधानलाई समावेशी बनाउने, विदेशीएको श्रम शक्तिलाई रोक्ने, पार्टीका...
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको आउँदो कार्यकाल पनि नेतृत्वका लागि सभापति पदमा प्रतिस्पर्धारत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो प्यानलमा शशांक कोइरालालाई पनि समेट्दै उम्मेदवारहरूको नयाँ सूची बनाएका छन् । यसअघि संस्थापनइतर समूहबाट आफै सभापतिको उम्मेदवार रहेका शशांक साझा उम्मेदवार तय गर्नका लागि पछि हटेका थिए । तर, शेखर कोइरालाले टीम बनाउँदा आफूसँग कुनै पनि सल्लाह नगरेकोप्रति उनी असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ । शेखर टीममा आफू निकट तीन जना नेताको नाम काटिएपछि शशांक शेखरले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि गएका थिएनन् । शेखरले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला पनि उनी आएका थिएनन् । यद्यपि शशांकको नाम शेखर र प्रकाशमान सिंहको प्यानलमा पनि राखिएको छ...